Kyrgyzstan: Oniversite Sangany, Ivon’ny Adihevitrin’ny Parlemanta. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Marsa 2018 6:59 GMT
(Fanamarihana. lahatsoratra nivoaka tamin'ny Febroary 2008)
Nandritra ny herinandro lasa teo, ny tranga momba ny Oniversite Amerikanina ao Azia Afovoany no lohahevitra tena noresahan'ireo blaogera Kyrgyz indrindra. Araka ny voalazan'ny tranonkalany, manana laza mipetraka ho an'ny “fanolorantena ho an'ny soatoavina demokrasia, ny fahalalahan'ny tsirairay ary ny fanahin'ny fanavaozana” ny AUCA, ary, mazava ho azy fa nanana anjara asa nanan-danja tamin'ny sehatrin'ny fanabeazana teo amin'ny faritra izy ary nivoatra ho iray anisan'ny mpitarika amin'ny sehatrin'ny fampianarana ambony ao Azia Afovoany.
Na izany aza, tamin'ny 15 Febroary, namoaka ny olana momba ny toerana misy ny AUCA ny solombavambahoaka Jogorku Kenesh [Parlemanta], i Ishak Masaliev, ary nanome kaomisiona iray ho an'ny Ministeran'ny Fanabeazana sy ny Kolontsaina Kyrgyz mba handinika ny olany.
Ny tena fandresena lahatra: manana lanja ara-tantara ny trano misy ny oniversite noho izy trano fonenan'ny governemanta Kyrgyz tamin'ny andron'ny Sovietika. Nilaza ihany koa izy fa avy any amin'ireo fianakaviana manam-pahefana manan-karena sy ambony toerana daholo ny ankabeazan'ny mpianatra ao amin'ny AUCA, raha toa ka manome isan-jato kely monj ireo mpianatra mahantra avy any amin'ny faritany.
Nahatonga adihevitra mafana tao amin'ny tontolon'ny bilaogy izany fanambarana izany. Nanamarika i Ibragim avy ao amin'ny Nomadistan hoe:
Afaka manome antoka ny mpamaky aho fa avy amin'ny kilasy sosialy antonony ny ankamaroan'ny mpianatra, maro amin'izy ireo no maazo fanampiana ara-bola mba handoavana ireo saram-pianarana. Mihevitra aho fa tokony hikarakara ireo olana goavan'ny firenena manontolo ny solombavambahoakantsika, fa tsy mandany fotoana betsaka amin'ny fampivoarana ivon-toerana toy ny AUCA..….
Naneho ny heviny ihany koa i Kanykei, mpianatra iray ao amin'ny AUCA:
Tsy zanakavavin'ny manam-pahefana ao amin'ny governemanta na an'ny mpanan-karena aho. Avy any amin'ny fianakaviana tsotra aho, ary faly aho fa afaka mahazo fanabeazana misy kalitao aty Kyrgyzstan,tsy kolikoly, izay indrisy fa misy any amin'ny oniversite maro. Tena manome fahafahana lehibe ho an'ny mpianatra rehetra ny AUCA.
Manameloka an'i Masaliev, solombavambahoaka efa lany andro, i Tuliprevolution :
Mbola manofinofy ny modely sovietika ihany i Masaliev amin'ny fanabeazana maimaimpoana! Mifohaza ry rahalahy, fotoanan'ny kapitalisma izao!!! Ankilan'izay, raha izay no tanjon'ireo ivon-toeram-pampianarana ambony tsy manana vatsim-pianarana, dia maninona izy raha manomboka amina oniversite karazany iray hafa, ny KRSU? Tsy hiteny zavatra toy izany momba ny oniversite, izay tantanan'ny rahalahy “lehibebe kokoa”, mihitsy ny kaominista…
Miteny[ros] i Anonymous avy ao amin'ny bilaogy Akipress iray:
Avy any amin'ny faritany ny 54 isanjaton'ireo mpianatra ao amin'ny AYCA. Mianatra any ny anabaviko/rahavaviko ary tsy mbola nanome vola na nanao kolikoly tamin'ny mpampianatra mihitsy izy.
Izao sisa no afaka antenaintsika ankehitriny – mba tsy ho terena hiala eo amin'ny toerana misy azy amin'izao fotoana izao anie ity oniversite izay mitondra saina mazava sy feno fahaizana ho an'ireo tanora avy any amin'ny ampahan'ny Azia Afovoany rehetra sy ny manodidina ity.